Somaliland: 23,300 oo arday ayaa u fadhiistay imtixaanaadka dugsiyada dhexe iyo sare
Home Somali News Somaliland: 23,300 oo arday ayaa shalay u fadhiistay imtixaanaadka dugsiyada dhexe iyo...
Somaliland: 23,300 oo arday ayaa shalay u fadhiistay imtixaanaadka dugsiyada dhexe iyo sare
Sida uu shaaciyey Wasiirka Waxbarashada Faarax Cilmi Geedoole, 23,300 arday ayaa maanta u fadhiistay imtixaanada shahaadiga ah ee dugsiyada dhexe iyo sare.
[quote]Dugsiyada sare waxa u fadhiisanaya 9,300 oo arday halka ay ka dhexena u fadhiisanayaan 14,000. Waa tiradii ugu badnayd ee imtixaan kan oo kale ah u fadhiista taariikhda Somaliland.[/quote]
Wasiir Geedoole shalay wuxu kormeer ku sameeyey dugsiyada sare ee Somaliland si uu indhihiisa ugu arko qaabka uu imtixaanku u socdo, wuxuna ardayda u ballan-qaaday in caddaaladda imtixaanka la sugi doono.
Qaar ka mid ah aqoonyahanka Somaliland ayaa sannadihii u dambeeyey ku dhalliilayey Wasaaradda Waxbarashada in aanay jirin arday dhacda imtixaanaadkan noocan iyadoo la sheegay in sababtu ay Wasaaraddu sidaas u yeeshaa ay tahay iyadoo ka hortagta in ardayda dhacdaa ay niyadjabaan kadibna tahriibaan.
Hase ahaatee aqoonyahannada arrintan dhalliila ayaa aaminsan in ay taasi niyadjebinayso ardaydii maskaxdoodu wanaagsanayd dedaalkooduna badnaa isla markaana cid dedaali doontaana aanay jirin dooni mar haddaan cidiba dhacayn.
Farah Elmi Geedole
Wasaaradda Waxbarashadda JSL
Somaliland: Nuxurka Kulan uu Madaxweyne Siilaanyo la Yeeshay Safiirka Ingiriiska u Qaabilsan Somaliland Iyo Somalia
Somaliland: Dr. Maxamed Cabdillaahi Oo Ka Digay Halista Ka Dhalan Karta Muddo Kordhin Kale Oo La Sameeyo
Somalia: Al Shabaab deny Burundian president’s claim
Deg Deg: Fanaan Ka Tirsan Kooxda Xiddigaha Geeska Oo Imika Xabsiga La Dhiggay Iyo Sababta Loo Xidhay